Xakimullah Mehsud oo lagu dilay Pakistan - BBC News Somali
Xakimullah Mehsud oo lagu dilay Pakistan
Image caption Xakimullah Mehsud ayaa waraysi uu siiyay BBC ku sheegay inuu wadahadal diyaar u yahay.
Wasiir sare oo ka tirsan dowladda pakistan waxaa uu sheegay in weerarka dayuuradda aan duuliyaha lahayn ee la rumaysan yahay in lagu dilay hoggaamiyihii Daalibaanka reer Pakistan ay baabi'isay iskudaygii dowladda Pakistan ay ku doonaysay inay wada hadal nabadeed la yeelato mintidiinta.wasiirka arrimaha gudaha, Chaudry Nisar Ali Khan, waxaa uu sheegay in wafdi uu u duuli lahaa gobolka qabaa'ilku ka taliyaan ee woqooyiga Waziristan maanta oo Sabti ah si ay ula kulmaan hoggaamiyaha Daalibaanka reer Pakistan Xakimullah Mehsud iyo madax kaloo sar-sare oo ka mid ah mintidiint.
Qaybo ka mid ah dowlada Pakistan waxay si dhab ah uga caraysan yihiin in uu dhacay weerarka dayuuradda aanay cidina wadin ee loo haysto in Maraykanku qaaday uu dhacay iyadoo markaas uun la rajeynayay in wax heshiis nabadeed ah la gaari doono.
Ra'iisal wasaaraha, Nawaz Shariif, waxaa uu hore uga dhaadhiciyay dhammaan axsaabta siyaasadda ee waaweyn inay taageeraan qorshihiisa ah in wada xaajood lala galo dagaalyahannada Taliban ee Pakistan, si loo soo afjaro dagaalka ay Daalibaan muddada dheer dalkaas ka wadeen.
Siyaasiyiinta mucaaradka oo uu ku jiro ciyaartoygii hore ee Cricket-ka Imran Khan waxay muujiyeen inay aad uga xun yihiin.
Imran Khan waxaa laga soo xigtay inuu yiri dowladdu waa inay ka fiirsataa inay xirto waddooyinka sahaydu u marto ciidammada Nato ee jooga dalka deriska ah ee Afqanistaan.
Qaar ka tirsan Taliban iyo saraakiil xagga mukhaabaraadka ee dowladda Pakistan waxay sheegeen in aaska Xakimullah Mehsud uu ka dhici doono woqooyiga Waziristan waqti maanta ka mid ah. Waxaa durbadiiba la sii qiyaasayaa qofka uu noqon doono hoggaamiyaha xiga ee Daalibaanka Pakistan. Su'aasha kale ee weyni waxay tahay sida ay mintidiintu uga jawaabi doonaan weerarkan ugu dambeeyay.